> Resource > Windows > Sida loo Guba Windows Movie Kan sameeyey Project in DVD
Ma doonaysaa in ay gubaan aad Windows Movie files mashruuca Kan sameeyey si DVDs, si aad iyaga ka ciyaari kara DVD ciyaaryahan aad? A file mashruuca Kan sameeyey Windows Movie ma aha file video ah. Iyo qalab ku dhowaad dhammaan DVD gubanaya ma ogolaan kartaa in aad si toos ah u soo dhoofsadaan Windows files mashruuca Kan sameeyey Movie ay gubaan DVD. Waxaad u baahan tahay si ay u badbaadin sida video files, markaas waxaad isticmaali kartaa DVD gubi jecel in ay gubaan in DVD.
Next, waxaana idin ​​tusin doonaa talaabooyinka faahfaahsan. Halkan, waxaan inta badan ay isticmaalaan Wondershare DVD Creator (Wondershare DVD Creator for Mac ). Waxaa jira sababo badan oo aan u isticmaali. Marka hore, waxa ay taageertaa dhammaan nidaamka Windows. Dadka qaarkood waxay jecel yihiin inay ku gubtaan DVDs ay la Windows DVD abuuray. Si kastaba ha ahaatee, Microsoft ayaa taageero u Windows DVD Kan sameeyey hoos tan iyo Windows 8. labaad, waxaa si xoog leh ka shaqeeyaa, waayo, waxaa la taageeraa dhamaan qaabab video iyo baxayn hoos. Saddexaad, ha ii gubi DVD xirfadle-raadinta ee daqiiqo. Oo sidaas daraaddeed on.
1 Save Windows Movie files mashruuca Kan sameeyey sida video files
Run Windows Movie Kan sameeyey, u tag "File"> "Mashruucan Open" in ay dajiyaan aad Windows Movie files mashruuca abuuray. Markaas, jiidi mid ka mid ah files si Storyboard, iyo ugu dambaysta, guji "Save si aan computer" si ay u dhoofiyaan. Waxaad ka heli doontaa faylka la badbaadin karaa qaab wmv.
2 Import badbaadiyey files wmv in Wondershare DVD Creator
Orod Wondershare DVD Creator, kadibna riix "+ Import" badhanka in ay interface inay ku shuban, kuwaas oo badbaadiyey files wmv. Waxa la soo bandhigi doonaa sida soo socota. Haddii aad u baahan tahay in aad ku darto horyaal, waxaad riixi kartaa "dar horyaalka" doorasho. Oo haddii aad rabto in aad beddesho xigxiga video ah, waxaad riixi kartaa "↑" ama "↓" doorasho.
3 Samee DVD menu ah DVD aad
Tag libary Menu in la doorto mid ka mid ah aad jeceshahay template DVD menu, ka dibna u astaysto in aad ka jeelahay. Tusaale ahaan, waxaad astaysto thumbnail ah, qoraalka, badhamada, iyo dar music soo jeeda, sawirka, iwm
Fiiro gaar ah: Haddii aad doonayso inaad ka sii marto DVD menu, fadlan u helaan in ay naga website garaacida cagaaran hoos button fallaadhiina waxay ka furmo this.
4 Guba Windows Movie Kan sameeyey si DVD
Hadda, aad geliso laga yaabaa DVD disc maran (DVD5 iyo DVD9 ayaa labadaba ay taageerayaan). Ka dib markii in, tag "Guba" interface, waxaa fiirisaa "Guba si disc" sanduuqa, ee la soo dhaafay, ku dhufatey "Guba" badhanka si ay u bilaabaan gubanaya Windows Movie Kan sameeyey si DVD.
Fiiro gaar ah: Haddii aad Windows Movie files mashruuca Kan sameeyey waa ka weyn tahay meel bannaan oo DVD ah lagu kaydiyo, app this si toos ah u cadaadin doona faylasha aad si haboon disc DVD ah.
Sida loo rogo ama Windows Movie Kan sameeyey Faylal ay si MP4
20 Apps Phone Best Windows 2015
Sida loo xaliyo Blue Screen (BSOD) ee Windows 7
Sida loo Guba DVD la Windows Media Player 11,12